समाचार Archives - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
रहेनन् वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार विनय कसजु
मंसिर १० काठमाण्डौं , अग्रज बाल साहित्य सर्जक एवं सूचना विज्ञ विनय कसजूको आज दिउँसो २ बजेमेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको छ। निमोनियाका कारण गम्भीर बिरामी परेका कसजूलाई राजधानीको मेडिसिटी अस्पतालमा गत कात्तिक १९ गते भर्ना गरिएको कसजूको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो । स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि उनलाई आइसियूमा भेन्टिलेटरसहित उपचार गरिएकोमा केही सुधार देखिएको थियो। कस्तो छ त कसजूको नेपाली साहित्यमा उ...
कफि क्लबमा सुनिए शेरचन
काठमाण्डौ ७ मंसिर । कफि क्लबको शनिबारिय साहित्यिक श्रृखलामा आज कवि तथा अनुवादक तेजेन्द्र शेरचन 'निरुकोवा' सुनिए । शेरचनले मैले आज रंग पाए, धर्तीका गीत, भिखारीहरुको देश, अन्तिम युद्ध, कहिल्यै ननिभ्ने आगो लगायत छानिएका एक दर्जन रचना सुनाए । उनले केहि हाइकु र अनुवाद कविता समेत पस्किए । कविता वाचनको बीचबीचमा प्रस्तुत भएका रचना गर्भ र जोडिएका प्रसंगहरुले उपस्थित साहित्यानुरागीहरुलाई थप मनोरञ्जन प...
कविता तङ्सिङ २०७६ सम्पन्न
काठमाडौं, २८ भदौ । याक्थुङ कविता बाचनको पहिलो श्रृंखला 'कविता तङ्सिङ्'-२०७६’ सम्पन्न भएको छ । लिम्बू साहित्यकाहरुको साझा संस्था याक्थुङ लेखक सङ्घ उपत्यका समितिले आयोजना गरेको तङ्सिङ् आज काठमाण्डौ जमल स्थित नागघरमा भएको हो । कविता तङ्सिङ्मा दुई दर्जन बढि कविले कविता वाचन गरे । लिम्बू संस्कृती झल्कने मञ्चको साजसज्जा, कविताको भाव सुहाउँदो संगीतको साथ कविता वाचनको नौलो शैली निक्कै रोम...
यालेस कोरियामा गठन
काठमाण्डौ । याक्थुङ लेखक संघ दक्षिण कोरियामा प्रवास समिति गठन भएको छ । कोरियामा रहेका लिम्बू लेखकहरूको एक भेलाले वियोगी काईलाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा आत्मविक्रम नेम्बाङ, प्रदीप कन्दङवा, विङकल चेम्जोङ, रहेका छन् । उपाध्यक्ष भीमराज चेम्जोङ, गनिन्द्र विवश, नोगेन नेम्बाङ, गणेश केरुङ हाङसेम, महासचिव बाबु बलिन्द्र, सचिव सेसेफुङ शेर्मा, देबेन्द्र थाम्सुहाङ, कोषा...
राजन मुकारुङको ‘हाटा जाने अघिलो रात’ सार्वजनिक
काठमाण्डौ । चर्चित लेखक राजन मुकारुङको पाँचौ कविता संग्रह विमोचन भएको छ । मदन पुरस्कार विजेता तथा सृजनसिल अराजकताका अभियन्ता मुकारुङको पाँचौ कविता संग्रह ‘हाटा जाने अघिलो रात’ आज विमोचन गरिएको हो । लेखक, कलाकार र साँस्कृतिककर्मीहरुको बाक्लो उपस्थितिका बीच मण्डला थिएटरमा छोटो विमोचन कार्यक्रम गरियो । अहिलेका चर्चित नायक दयाहाङ राईले संग्रहका ‘गाउँ’ शीर्षक कविता बाचन गरेर कार्यक्रमको सूरुवात ...
मदन पुरस्कारका लागि छानिए ७ कृति (सूचीसहित)
काठमाडौं २५ असार । नेपालको प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार ‘मदन पुरस्कार–२०७५’ का लागि ७ कृति छनोटमा परेका छन् । मदन पुरस्कार गुठीले आज एक विज्ञप्ती जारी गरि उत्कृष्ठ सात कृतिको नाम सार्वजनिक गरेको हो । गुठीले श्रेष्ठ सूची तयार गर्न गठित समितिले यो सूचि तयार गरेको हो । गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले २ सय ५७ कृतिमध्ये ७ वटालाई छनौट समितिको सिफारिसमा अन्तिम लिष्टमा राखिएको जनाए । छनोटमा प...
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल महोत्सवको उद्घाटन गर्दै
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६२औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कविता महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । महोत्सवमा ३१ कवि वाचनका लागि छनौट भएका थिए । तस्वीर :नवीन पौडेल ...
अज्ञात र उपाध्यायलाई वर्ष गीत पुरस्कर
काठमाडौं । सिर्जनशिल अराजकता साहित्यिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा गीतकार हाङयुग अज्ञात र गीतकार डा. डीआर उपाध्यायलाई ‘वर्ष गीत पुरस्कार’बाट पुरस्कृति गरिएको छ । गीतकार संघ नेपालले प्रदान गर्ने ‘वर्ष गीत पुरस्कर’ यो बर्ष अज्ञातको आमा मेरा र उपाध्यायको ‘सन्तानको शिर उठाउन हजार ठाउँ शिर झुकाउने बाबालाई बिर्सिएर...’ लाई पुरस्कृत गरिएको हो । नगद रु ५१ हजार र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको हो गीतकार संघ नेपा...
पथरीमा सीएम कन्दङ्वा प्रतिभा पुरस्कारको घोषणा
मोरङ । मोरङको पथरीमा स्थायी बासिन्दा शिक्षासेवी, साहित्यकार चन्द्रमान (सीएम) कन्दङ्वाको स्मृतिमा बार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने गरी दुई पुरस्कार स्थापित भएको छ । स्थापित भएको पहिलो पुरस्कार लोक गायक एलपी जोशी र साहित्यकार धनकुटे कान्छालाई प्रदान गरिने भएको छ । सी.एम. कन्दङ्गा प्रजान्त्र प्रेमी राजनीतिक कर्मी समेत थिए । कन्दङ्वाको छोरो रविन कन्दङ्वाले सीएम कन्दङ्वा स्मृति कोष स्थापना गरेको आज (स...
डी.अनुरागीको ‘विसङ्ग्गतिका धारले रेटिएका फूलहरु’ बिमोचन
काठमाण्डौ । कवि डी अनुरागीको नयाँ कविता स्रग्रह विसङ्ग्गतिका धारले रेटिएका फूलहरु बिमोचन भएको छ । बुधबार काठमाण्डौ कोटेश्वर स्थित ग्रामर कलेजको हलमा शुभसेर राई जसराज किराती, सुकराज राई, पुष्ष् श्रेष्ठ लगायतले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेको हो । विमोचनपछि बोल्दै कवितामा विचार, लय हुनु जरुरी रहेको साथै कविता स्वतत्र हुनु पर्ने टिप्पणी कर्ता डा। भागवत आचार्य बबताए। वरिष्ठ साहित्यकार जसराज किराती...
तिलक भोजुरेको कविता